Vive Le Football Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update]
March 19, 2022 Janoary 15, 2022 by Reyan Ahmad
Ianao ve no mpankafy baolina kitra lehibe indrindra ary te hiaina ilay lalao mandroso indrindra? Raha eny dia andramo ny Vive Le Football Apk. Izy io no fampiharana Android farany, izay manome ny traikefa filokana baolina kitra tsara indrindra ho an'ny mpilalao hilalao sy hankafiziny.
Ny lalao nomerika dia iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra ahafahan'ny mpankafy mahatsapa ny traikefa mitovy amin'ny fanatanjahantena tena tiany. Misy fampiharana Android isan-karazany hita eny an-tsena, saingy zavatra mihoatra noho ny lalao fotsiny izany. Mijanòna miaraka aminay ary alao ny fampahalalana rehetra momba ity app ity.
Inona ny Vive Le Football Apk?
Vive Le Football Apk dia rindranasa filalaovana Android, izay manolotra ny sehatra filalaovana baolina kitra mandroso indrindra ho an'ny mpilalao hilalao sy hankafiziny. Raha te hilalao ny lalao nomerika Soccer tsara indrindra ianao dia mila ity fampiharana ity fotsiny dia azonao daholo.
Misy fiasa samy hafa misy amin'ity lalao ity, izay mahatonga azy io ho sehatra tsara indrindra ho an'ny mpankafy. Noho izany, hanomboka amin'ny interface an'ny Vive Le Football Game Apk izahay. Sariaka ny UI ary voafaritra tsara ny safidy rehetra ahafahan'ny mpampiasa mahazo fidirana mora amin'ny serivisy.
Ny sary amin'ny lalao dia iray amin'ireo tsara indrindra, izay manome ny mpilalao traikefa amin'ny fotoana tena izy. Azonao atao ny mahita ny sary 3D tsara indrindra, izay manome anao ny traikefa gaming tsara indrindra. Ny endri-tsoratra sy ny tontolo iainana rehetra dia manome anao traikefa tsara kokoa sy mahavariana.
Noho izany, ny lalao dia mahaliana kokoa noho ny lalao hafa eny an-tsena. Ao amin'ny Vive Le Football Game dia tsy maintsy mitantana ny ekipa sy ny lalao ianao. Amin'ny voalohany dia tsy maintsy mahazo mpitantana ianao, izay midika fa tsy maintsy manao ny asan'ny mpitantana rehetra ianao.
Ny fisafidianana mpilalao dia iray amin'ireo tanjona mahazatra indrindra, ahafahanao manangana ekipa hiditra amin'ilay hetsika. Misy andiana mpilalao marobe azo ampiasaina ho an'ireo mpampiasa, izay azonao atao ny mifidy sy mamaha. Raha vantany vao manangana ny ekipanao ianao dia afaka miditra ireo hetsika.
Lalao Vive Le Football Android
Ny lalao dia tena tsotra sy mahaliana, izay ahitana fomba maro ho an'ny mpilalao hilalao. Ny maodelin'ny mpitatitra dia iray amin'ireo fomba mahazatra sy nilalao indrindra amin'ity lalao ity. Ao amin'ny mpitatitra anao dia tsy maintsy manangana ny ekipanao ianao araka ny hetsika samihafa sy ny ekipa mpanohitra, izay tsy maintsy atrehinao.
Misy ihany koa ny maody lalao lalao namana azo raisina ho an'ny mpilalao, izay ahafahanao milalao lalao namana amin'ny ekipa hafa. Noho izany, tsy maintsy ataonao ny ekipa ary avy eo ny lalao. Tsy maintsy fehezinao ny mpilalao tsirairay ao amin'ny ekipanao any an-tsaha ary manaova isa.
Omena ny fanaraha-maso izay ahafahanao mandray fanapahan-kevitra isan-karazany amin'ny lalao. Manome fifehezana voafaritra ho an'ny mpampiasa hifehy ny fihetsiky ny toetra izy io. Hizara ny fanaraha-maso amin'ny lisitra eto ambany izahay.
360 Controllers de direction
Ireo dia azo alaina ho anao hifehezana ny mpilalao ao amin'ny ekipanao. Noho izany, misy ihany koa ny endri-javatra hafa azo alaina, izay ahitana ny scoreboard sy ny endri-javatra maro hafa, izay azonao jerena ao. mahazo ity Lalao 3D ho an'ny Android anao ary manomboka mikaroka ny endri-javatra rehetra.
Raha efa nilalao PESHUB ianao dia hanana traikefa mitovy amin'ity fampiharana ity. Fa ny sary dia mandroso kokoa noho ny ofisialy PESHUB 21 Apk. Noho izany, tsy maintsy manandrana ity lalao ity ianao ary mankafy azy. Azonao atao koa ny manome ny hevitrao avy amin'ny fizarana hevitra etsy ambany.
anarana Vive Le Football
Anaran'ny fonosana com.netease.vlf
Screeenshot ny App
Ahoana ny fampidinana ny Vive Le Football Play Store?
Tsy misy ao amin'ny Google Play izy amin'izao fotoana izao satria amin'izao fotoana izao, ny tsimbadika beta dia misy eny an-tsena. Noho izany, hizara ny Apk sy OBB izahay rehetra, izay azonao sintonina mora foana avy any ambony sy any ambany amin'ity pejy ity. Manaova paompy fotsiny eo aminy ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Lalao Android Football tsara indrindra
Hetsika samy hafa misy
Sehatra mpitantana marobe
Amboary ny toetran'ny toetra
Fomba maody maro azo atao
Vive Le Football Apk misintona ny lalao Android tsara indrindra ho an'ireo tia baolina kitra mba hiaina ny lalao tena izy. Noho izany, raha mieritreritra ianao fa iray amin'ireo mpankafy baolina kitra lehibe indrindra, dia mila manandrana ity fampiharana ity indray mandeha farafaharatsiny ianao. Raiso amin'ny bokotra fisintomana etsy ambany.
Sokajy Games, Sports Tags Lalao 3D, Vive Le Football Android, Vive Le Football Apk, Vive Le Football Apk Download, Lalao Vive Le Football Apk Post Fikarohana
Dak Pay App Download ho an'ny Android [2022 Update]